20 နှစ်ပေါင်း + ကြေးနီထုတ်ကုန်များတစ်နေရာတည်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း
အလယ်အလတ်တန်းစားစျေးကွက်အနေအထားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပစ်မှတ်အဖြစ်အခြေခံသည်, ထက်ပိုပြီးနှင့် 20 နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံကို
SMAK သည်နိုင်ငံခြားနှင့်ပြည်တွင်းဖောက်သည်များအတွက်နည်းပညာလိုအပ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကောင်းမွန်သောနားလည်မှုရှိသည်
SMAK သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြေးနီနှင့်ကြေးဝါအပိုင်းအစအားလုံးကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ (သို့) ဖောက်သည်စံနှုန်းနှင့်အပြည့်အဝကိုက်ညီစေရန်သေချာသည်.
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ： Copper Sheet ကို electrolytic copper ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, ingot အားဖြင့်အပြောင်းအလဲနဲ့မှတဆင့်, ပူပြင်းလိပ်, အအေးမိ, အပူကုသမှု, မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေး, ဖြတ်တောက်ခြင်း, ပြီးသွားပြီ, ပြီးတော့ထုပ်ပိုး. အဆိုပါပစ္စည်းကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အပူနှင့်လျှပ်စစ် conduction ရှိပါတယ်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပြွန်နှင့်ကောင်းသောချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ဒါဟာကျယ်ပြန့်လျှပ်စစ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်, မော်တော်ကား, ဆက်သွယ်ရေး, ဟာ့ဒ်ဝဲ, အလှဆင်ခြင်းနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းကုန်ပစ္စည်း parameters တွေကို： GB ကို ISO ASTM JIS TU1 Cu-OF C10200 C1020 T2 Cu-ETP C11000 C1100 TP1 Cu-DLP C12000 C1201 TP2 Cu-DHP C12200 C1220 GB ကိုဖွဲ့စည်းမှု(%) : P အိုသည်အခြား TU1 အတူ 99.97 0.002 ထက်ငယ်သော 0.002 TU2 ချိန်ခွင်လျှာ 99.95 0.002 ထက်ငယ်သော 0.003 T2 ချိန်ခွင်…
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ： electrolytic ကြေးနီအပေါ်အခြေခံပြီးကြေးဝါစာရွက်, သွပ်နှင့်၎င်း၏ကုန်ကြမ်းအဖြစ်သဲလွန်စဒြပ်စင်, ingot အားဖြင့်အပြောင်းအလဲနဲ့မှတဆင့်, ပူပြင်းလိပ်, အအေးမိ, အပူကုသမှု, မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေး, ဖြတ်တောက်ခြင်း, ပြီးသွားပြီ, ပြီးတော့ထုပ်ပိုး. ပစ္စည်းစွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်စဉ်များ, ပလတ်စတစ်, စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ, ချေးခုခံ, စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကောင်းသောဖြူ. ဒါဟာကျယ်ပြန့်လျှပ်စစ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်, မော်တော်ကား, ဆက်သွယ်ရေး, ဟာ့ဒ်ဝဲ, အလှဆင်ခြင်းနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ. ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်： GB ကိုက ISO ASTM JIS H59 CuZn40 C28000 C2800 H28 CuZn40 C27400 C2740 H63 CuZn37 C27200 C2700 H65 CuZn35 C26800 C2680 H68 CuZn30 C26000 C2600 H70 CuZn30 C26000 C2600 H80 CuZn20 C24000 C2400 H85 CuZn C800 C85 CZ00 C800 C85 C800 C85 C800 C85 C800 C2400 C85 CZ00 C85 C800 C2400 H85 CuZn C2500 H85 CuZn CZ002
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ： ပန့်ခ်ျကေလီကြေးနီပြွန်ပန်ကိတ်ကိုကြွေပြားကပ်ထားသောကြေးနီပြွန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, သီးခြားလေအေးပေးစက်နှင့်အခြားစီမံကိန်းအတွက်ဆက်သွယ်မှုတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်. ၎င်းတို့အားလုံးသည်နိုင်ငံတကာစံနှုန်း ASTM B280 နှင့်အညီဖြစ်သည်, JIS H3300, AS / NZS 1571 စသည်တို့. အားသာချက်များ - စံ: ASTM B280, JIS H3300, …
insulation ကြေးနီပြွန် SMAK Insulation Tube ၏စီမံကိန်းသည် ထိုအချိန်မှစ၍ စတင်ခဲ့သည် 2014. ငါတို့မှာရှိတယ်3ထုတ်ကုန်လိုင်းများသည်ကိုရီးယားနှင့်ဂျပန်မှမြှုပ်စက်များနှင့်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကိုတင်သွင်းခဲ့သည်. ပြွန်မြှုပ်ခြင်းအချင်းသည် ၄.၇၆ မှ ၇၀ မီလီမီတာခန့်ရှိသည်, အလိုအလျောက်ပြွန်ဝတ်ဆင်ထားသည့်အမြင့်ဆုံးအရှည်မှာ ၅၀ မီတာဖြစ်သည်: မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည် (120"ဂ), မီးလျှံသည်စံနှုန်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်: ယူအက်စ်အေ ul-HF-1, ပြင်သစ် M1, သြစတြေးလျ BL-s1-d0, China B1 အိုမင်းခြင်းနှင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်. Xenon ကို arc amp ၏နာရီ 200 - irradiation ပြီးနောက်, အရေးအကြောင်းမရှိဘူး, အပေါက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များအတွက် pulverization သို့မဟုတ်ကွဲအက်အခြေအနေ. ထို့ကြောင့်, insulator တွင်လည်းပြွန်၏အိုမင်းခြင်းကိုခံနိုင်စွမ်းကိုခန့်မှန်းနိုင်သည် 8-10 နှစ်ရေငွေ့၏ငွေ့ရည်ဖွဲ့ကာကွယ်တားဆီးနိုင်စွမ်း, အလုပ်လုပ်အပူချိန်ကနေ -70C မှဖြစ်ပါတယ် 120"ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအဖြစ်ကို C. အစိုဓာတ်ကိုစိမ့်ဝင်နိုင်သည့်ကိန်းက .31.3 × 10-10g /(m.s.Pa) ဥရောပ RoHS စံ, ခဲ, Cadmium, မာကျူရီ, Hexavalent ခရိုမီယမ် Polybrominated Biphenyls (PCBS)Polybrominated Diphenyl Ether စမ်းသပ်မှုများသည်အရည်အချင်းပြည့်မှီပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သည်ဥရောပမှဖောက်သည်များအတွက်အရောင်းရဆုံးဖြစ်သည်, သြစတြေးလျဂျပန်, ကိုရီးယား, ထိုင်ဝမ်နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်း. ဒါ့အပြင်, တရုတ်ထုတ်ကုန်အညွှန်းကိန်း၏ပြည်တွင်းစျေးကွက်ရှိလူသိများသောလေအေးပေးစက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဗဟိုလေအေးပေးစက်တပ်ဆင်သည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်ကြာမြင့်စွာလက်တွဲဆောင်ရွက်သည်： ပိုက် fit (MT-S စံ) မော်ဒယ်အရွယ်အစားကြေးနီပိုက် / အပြင်အချင်း×အထူ(မီလီမီတာ) အတွင်းအချင်း：အရှည်အတွက်သင့်လျော်သော insulator တွင်လည်းပိုက်၏အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) (မီလီမီတာ) MT-S0Z01(1/4) 6.35× 0,75 Ø8(± 0.5)…
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ： ကြေးနီ ROD & ဘတ်စ်ကားဘားကြေးနီလှံတံ & ဘတ်စ်ကားဘားသည် MKM ရှိသမိုင်းဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်သည်. ၎င်းတို့ကိုလျှပ်စစ်ထုတ်ကုန်များတွင်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်, ၎င်း၏ High- စီးကူးအဖြစ်. သို့သော်ငြားလည်း, သူတို့ကျယ်ပြန့်လျှပ်စစ်ထုတ်ကုန်အတွက်ရေတိုင်ကီအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်, ၎င်း၏မြင့်မားသောအဖြစ်- အပူလျှပ်ကူးသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: ကြေးနီချွတ်မှုကို electrolytic copper ဖြင့်ပြုလုပ်သည်, ingot အားဖြင့်အပြောင်းအလဲနဲ့မှတဆင့်, ပူ, လှိမ့်, အအေးတုံးအပူကုသမှု, မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေး, ဖြတ်တောက်ခြင်း, ပြီးသွားပြီ, ပြီးတော့ထုပ်ပိုး. အဆိုပါပစ္စည်းကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အပူနှင့်လျှပ်စစ် conduction ရှိပါတယ်, fiexible ပြွန်နှင့်ကောင်းသောချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ဒါဟာကျယ်ပြန့်လျှပ်စစ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်, မော်တော်ကား, ဆက်သွယ်ရေး, ဟာ့ဒ်ဝဲ, အလှဆင်ခြင်းနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ. ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အထူးအသုံးပြုရန်ထုတ်ကုန်များကိုတီထွင်ခဲ့သည်, ထိုကဲ့သို့သောခြောက်သွေ့တဲ့အမျိုးအစားထရန်စဖော်မာ strips တွေအဖြစ်, အဆိုပါ RF coaxial cable ကို strips တွေ, ဝါယာကြိုးနှင့် cable ကိုမှဒိုင်းလွှား strips တွေ, ခဲဘောင်ပစ္စည်းများ, အီလက်ထရွန်းနစ်များအတွက်လာကြတယ်, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး photovoltaic ဖဲကြိုး, ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ရေရပ်နား strips တွေ, ကြေးဝါတံခါးများနှင့်အတူအလှဆင်, ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ, ကားတိုင်ကီ strips တွေ, ရေတိုင်ကီ strips တွေ, စသည်တို့. ကုန်ပစ္စည်း parameters များကို： GB ကို ISO ASTM JIS TU1 Cu-OF C10200 C1020 T2 Cu-ETP C11000 C1100 TP1 Cu-DLP C12000 C1201 TP2 Cu-DHP ...
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ： electrolytic ကြေးနီအပေါ်အခြေခံပြီးကြေးဝါချွတ်, သွပ်နှင့်၎င်း၏ကုန်ကြမ်းအဖြစ်သဲလွန်စဒြပ်စင်, ingot အားဖြင့်အပြောင်းအလဲနဲ့မှတဆင့်, ပူပြင်းလိပ်, အအေးမိ, အပူကုသမှု, မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေး, ဖြတ်တောက်ခြင်း, ပြီးသွားပြီ, ပြီးတော့ပစ္စည်းဖြစ်စဉ်များစွမ်းဆောင်ရည်ထုပ်ပိုး, ပလတ်စတစ်, mechanica ဂုဏ်သတ္တိများ, ချေးခုခံ, စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကောင်းသောဖြူ. ဒါဟာကျယ်ပြန့်လျှပ်စစ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်, မော်တော်ကား, ဆက်သွယ်ရေးဟာ့ဒ်ဝဲ, အလှဆင်ခြင်းနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ. ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အထူးအသုံးပြုရန်ထုတ်ကုန်များကိုတီထွင်ခဲ့သည်, ထိုကဲ့သို့သော, အဖြစ်, ခြောက်သွေ့တဲ့အမျိုးအစားထရန်စဖော်မာ strips တွေ, အဆိုပါ RF coaxial cable ကို strips တွေ, ဝါယာကြိုးနှင့် cable ကိုမှဒိုင်းလွှား strips တွေ, ခဲဘောင်ပစ္စည်းများ, အီလက်ထရွန်းနစ်များအတွက်လာကြတယ်, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး photovoltaic ဖဲကြိုး, ကြေးဝါတံခါးများနှင့်အတူအလှဆင်, ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ, ကားတိုင်ကီ strips တွေ, ရေတိုင်ကီ strips တွေ, ခလုတ်ကိုတီးဝိုင်း, တူရိယာအဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်, သန့်ရှင်းရေးအသုံးအဆောင်ချွတ်, စသည်တို့ကို GB ကိုက ISO ASTM JIS H59 CuZn40 C28000 C2800 H62 CuZn40 C27400 C2740 H63 CuZn37 C27200 C2700 H65 CuZn35 C26800 C2680 H68 CuZn30 C26000 C2600 H70 CuZn30 C26000 C2600 ...
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ： ဖြောင့်သောကြေးနီ TUBE ကြေးနီပြွန်ကိုလေအေးပေးစက်နှင့် condensator နှင့် radiator တို့တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်. ၎င်းတို့အားလုံးသည် standard ASTM B88 နှင့်အညီဖြစ်သည်, JIS H3300, AS / NZS 1571, စသည်တို့. …
SMAK INDUSTRIES CO ။ , LTD.
အရသာစက်မှုလုပ်ငန်းများ CO ။, LTD. (HUAHONG အဖွဲ့ ၀ င်) ထိပ်တန်းကြေးနီနှင့်ကြေးဝါထုတ်ကုန်များအတွက် ဦး ဆောင်ပေးသွင်းသည်, SMAK သည်ကြေးနီနှင့်ကြေးဝါလုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့သည် 2008. ၎င်း၏တည်ထောင်ကတည်းက, SMAK သည်၎င်း၏ဖောက်သည်များအတွက်ကောင်းမွန်သောပံ့ပိုးမှုများပေးခဲ့သည် , အများစုမှာအလတ်စားနှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်ကြသည်.